I-Nozze Di Figaro I-Synopsis - Ibali leMozart "Umtshato kaFiyane"
Ibali leMozart elithi "Umtshato kaFiyane"
ULezzz di Figaro, uWolfgang Amadeus Mozart , "Umtshato kaFietaro," owaqala ngoMeyi 1, 1786, kwi-Burgtheater, eVienna, eItali. Ibali lisetyenziswe eSepville, eSpain, iminyaka emininzi emva kweBarber yaseSeville .
Le Nozze di Figaro , UMTHETHO 1
Figaro, i-valet eya ku-Count Almaviva, kunye noSusanna, intombi, balungiselela umtshato wabo osondela ngokukhawuleza xa uFararo efunda ukuba u-Count unomnqweno kaSusanna.
Ukwesaba ukuba i-Count izakubuyisela umyalelo oya kumvumela ukuba alele embhedeni intombazana yakhe ngobusuku bakhe bomtshato ngaphambi kokuba umyeni wakhe ("droit du seigneur"), uFiraro uceba isicwangciso sokuphuma ngaphandle kweCount. Kamva kamva, uDkt. Bartolo kunye nomgcini wendlu yakhe endala, uMarcellina, ungene kwigumbi likaFinaro. Ukuze uhlawule ityala elifunekayo ku-Figaro, uMarcellina ufuna ukuba u-Figaro amtshatile-isithembiso asenze kuye ukuba akakwazi ukubuyisela imali ehlawulwayo. UDkt. Bartolo, usenomsindo kukuba uFiraro wanceda umtshato u-Count Almaviva waya eRosina (nge -Barber yaseSeville ), wavuma ukusiza uMarcellina. Ngaphambi kokushiya, uSusanna noMarcellina bathengisa intengiso. I-Cherubino, unkulunkulu ka-Count, ufika aze ashumayele i-infatuation yakhe enamandla kunye nabasetyhini, ngakumbi u-Countess, uRosina. U-Count uceba ukuhlwaya uCherubino emva kokubanjwa entsimini kunye noBarbarina, intombi yegadi. Ikerubino ibuza uSusanna ukuba athethe no-Countess egameni lakhe, enethemba lokuba uza kumncedisa aze atshabalalise isigwebo sakhe.
I-Cherubino ifihla ngokukhawuleza xa ivala i-Count isondela, yesaba ukuba ibanjwe noSusanna yedwa. Kodwa u-Count uvuyiswa ukubona uSusanna wedwa. Uzama ukukhwaza uSusanna, kodwa uphazanyiswa ngumphathi womculo, uDon Basilio. U-Basilio uxelela i-Count ukuba iCherubino inokuqhaqhazela kwi-Countess.
U-Count ufumanisa iCherubino efihliweyo, eyamcaphukisa ngakumbi. UFiraro ufika kunye nabakhonzi abaningana kwaye badumisa u-Count ukuphelisa "ilungelo du seigneur." Nangona kunjalo, i-Count ithumela iCherubino ukuba ijoyine umkhosi, ngoko yenza isicwangciso sokulibazisa umtshato kaFinaro.
Le Nozze di Figaro , UMthetho 2
Ngaphakathi kwamagumbi okubala ka-Countess, uSusanna ulungiselela u-Countess ngosuku, xa imibuzo engu-Countess uSusanna ngokuthembeka kuka-Count. USusanna utshele ukuba i-Count iye yamnika imali ngokubuyisela ukuthanda kwakhe, kodwa uyamqinisekisa ukuba akafuni into enokuyenza kunye ne-Count. U-Countess uqala ukwenza isicwangciso sokuqeqesha umyeni wakhe kwaye unquma ukuguqula iCherubino njengoko ngokwakhe kwaye ulungiselela ukudibana noMbali ngasese. Xa iCherubino ifika, inomdla ukukhonza u-Countess nganoma yiphi indlela ayenako, abafazi babini bayambathisa kwiingubo zamantombazana. Emva kokuba uSusanna ashiya i-ribbon, u-Count uzama ukungena egumbini kodwa unomsindo wokufumana igumbi livalelwe. Ikerubino ifihla ngaphakathi kwidonga ngaphambi kokuba u-Countess avule umnyango. Phakathi kwengxoxo yabo, i-Count iva isandi esivela kwi-wardrobe. U-Countess utshela ukuba nguSusanna kuphela, kodwa engakholwayo, umthabatha kunye naye ukuba athathe ezinye izixhobo zokuvula iingcango ze-wardrobe.
Ukuba ngaphezu kwezinto zonke emva kwesikrini, uSusanna unceda iCherubino iphunyuke kwiwindow phambi koBalo no-Countess ukubuya. Uyena kwi-wardrobe kwaye ulinde. Xa u-Count and Countess evula iingcango, bobabini bayamangalisa, kodwa izikhalazo zika-Count ziyancipha. Nangona kunjalo, uAntonio, umgadi wegadi, uyaqhaqhazela ukuba afune ukuba iintyatyambo zakhe ezintle ngaphandle kwefestile ye-Countess zityunyiwe. Ngaloo ndlela, uFietaro ungena ekamelweni elityhila i-ankle ehlanjwe emva kokuba ekhuphe iifestile. Uyavuya ukuxelela bonke ukuba amalungiselelo omtshato sele agqityiwe. Emva koko, uMarcellina, uBartolo, noBaslio bafika kunye neenkundla zamatyala zikaFatinaro kunye neCount ngokunyanisekileyo.
Le Nozze di Figaro , UMTHETHO 3
Kwindlu yokutshata, uSusanna utshele i-Count ukuba amhlangabeze ngasese engadini kuloo busuku.
Kodwa emva kokumbona uthetha kunye noFiyane emva kwexesha, uvakalelwa kukuba uphenywe. Utshela uFararo ukuba kufuneka atshate noMarcellina. Uthi uFebaro ubhikisha aze athi uqale ukuba neentsikelelo zabazali bakhe, abo wahlukana naye ekuzalweni kwakhe. Emva kokubetha ngamaxwebhu enkundla, uFiraro ufunda ukuba igama lakhe langempela nguRafaello, unyana ongekho mthethweni kaMarcellina noBartolo. Aba bathathu babelana ngokufudumala kunye noBartolo noMarcellina bavuma ukuba nomtshato womtshato ngaloobo busuku. USusanna ufika engazi izinto zeendaba, kwaye ekuboneni uFiyane ufaka uMarcellina, ufika kwisigqibo sokuba uFiraro unemizwa kaMarcellina. Emva kokujamelana noFiraro, ufunda inyaniso kwaye ujoyina ukubhiyozela. Emva kokuba wonke umntu agqitywe ngaphandle kwehholo, u-Countess ufika, uguqa uthando lwakhe olulahlekileyo. USusanna ubuyela ekuhlaziyeni i-Countess yesicwangciso sabo. U-Countess ubhala inqaku kwi-Count imyala ukuba abuyisele ipini eqhotyoshelweyo kwizinto ezizayo. Ngexesha lomtshato, uSusanna udlulisa ngokukhawuleza ileta kunye no-Count. I-Count, ephose umunwe wakhe, unqonkqola ileta kunye nepini phantsi.
Le Nozze di Figaro , UMthetho 4
Kwintsimi emva komtshato, uBarbarina utshela uFiraro noMarcellina malunga nokuza kwenzeka phakathi kukaSusanna no-Count. UFiraro ushiya emasimini ngaphambi kokuba uSusanna kunye no-Countess bafike bembethe iimpahla zabo. Emva kokuhamba ngeenkcukacha zesicwangciso sabo, u-Countess (ogqoke njengoSusanna) uhlala emva kwintsimi kwaye ulindele ukubala.
Okwangoku, uSusanna uhlabelela uthando lwakhe ngoFiraro, nangona uFiraro ukholelwa ngokuphambene ukuba uhlabelela nge-Count. Xa i-Count idibana ne "Susanna" engadini, ezo zibini zenza uthando olunomdla. Uyamnika indandatho aze ahambe. UFilaro ufumana uSusanna eguqulwe njengo-Countess, kwaye xa embona, umkhokela ngokuvuma ukuba uyamthanda. Ekugqibeleni, uyaqaphela ukuba uhleka nje kwaye uyazi ukuba ufumene inyaniso. I-Count ingena ekhangele uSusanna, ekhungathekile ukuba ayikwazi ukuyifumana. Ekugqibeleni, ukuba ngubani ocinga ukuba nguSusanna, ufumanisa ukuba ungumfazi wakhe. Uyammangalela ngenxa yobubudenge xa ​​emnika indandatho ayinika "uSusanna." Ucela ukuxolelwa kwaye konke kulungile.
UDon Giovanni waseMozart
U- Lucia di Lammermoor uDonizetti
ICavalleria Rusticana I-Synopsis
Les vepres siciliennes Isiqulatho
I-gelida manina I-Text ne-English Translation
Iindlela ezili-8 zokukhusela iMask Diving Mask from Fogging
UDkt Seuss 'I-Lorax: Ulwazi loLungiso lweSmedi
Indlela yokuDala iNyanga
Ukuphonononga iIntlukwano yoHlolo lweNkqubo: Indlela yokwenza iNqaba yaseNtshonalanga
USainthael uSain angeliNtloko
Par Is Uzakwethu
Ulwimi lweeNkcazo - ii-Shells zoLwandle
Ngaba ikhona iMigangatho-yeMigangatho yeMigangatho ye-Lofts ye-Golf Clubs?
Ukukhula koRhulumente eUnited States
Inkcazo yeNkcazo kunye nemizekelo